मौलिक ज्ञान बढाउने पुस्तक कम लेखिएका छन् | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता मौलिक ज्ञान बढाउने पुस्तक कम लेखिएका छन्
on: २६ पुष २०७५, बिहीबार १२:१२ अन्तरवार्ता, शिक्षा
मौलिक ज्ञान बढाउने पुस्तक कम लेखिएका छन्
सहदेव बस्नेत, लेखक, ‘सहकारी ज्ञानसागर’
डेढ दशकदेखि वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील सहदेव बस्नेत बैंकिङ कानून, लेखा तथा वित्त शास्त्रमा दखल राख्छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आफ्नो करीअर शुरू गरेका बस्नेतले विभिन्न सहकारी संस्थाको प्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्ष, लेखा समिति संयोजक हुँदै तत्कालीन टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकमा कम्पनी सचिव भई काम गरिसकेका छन् । आफूले काम गर्दाका अनुभव एवं परिमार्जित ऐन कानून समेटेर उनले ‘सहकारी ज्ञानसागर’ नाम पुस्तक लेखेका छन् । यसै महीना बजारमा आएको उक्त पुस्तक सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिका लागि उपयोगी हुने बताइएको छ । प्रस्तुत छ, ‘सहकारी ज्ञानसागर’ र नेपालको आर्थिक क्षेत्रबारे बस्नेतस“ग आर्थिक अभियानका निर्भीक रायमाझीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘सहकारी ज्ञानसागर’ किन लेख्नुभयो ?
विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी मेरो जीवनको पहिलो कार्यक्षेत्र हो । मैल करीब आधा दर्जनजति सहकारीमा प्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्ष, लेखा समिति संयोजक भएर काम गरिसकेको छु । अहिले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहकारीसँगै आबद्ध छु । आफ्नो जीवनको डेढ दशक बिताएको क्षेत्र भएको र बैंकिङ कानूनको विद्यार्थी पनि भएकाले सहकारीको नियामक निकाय, सहकारी संस्थाहरूको हिँडाइ नमिलेको देखेर यो पुस्तक लेखेको हुँ । यससँगै क्षेत्रमा मेरो अनुभवले अरू मानिसलाई पनि केही ज्ञान मिलोस् भन्ने अभिप्रायले पुस्तक लेखेको हुँ ।
नेपालका सहकारीको वर्तमान स्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ ?
चितवनको बानपुरमा स्थापना भएको सहकारीपछि नेपालमा आधुनिक सहकारीको विकास भएको हो । ६ दशकमा नेपालमा सहकारी संस्था संख्यात्मक रूपमा बढेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा यसको भूमिका पनि अग्रणी छ । तर सरकारको नीति र कार्यान्वयनको अभावले सहकारी क्षेत्र नियमभन्दा केही बाहिर जान खोजेको छ । यो क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ धेरै उतारचढाव आइरहन्छ । यसलाई गतिशील बनाउन पारदर्शिता, नियमितता र अनुशासन आवश्यक हुन्छ । नियामक निकायको कमजोरीको आडमा केहीले लाभ लिइरहेका छन् । केही सहकारीले भने निकै राम्रो गरिरहेका पनि छन्, जसले गर्दा एउटा साधारण सदस्य तथा एक आम कृषकको जीवनस्तर माथि उठेको छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि मापदण्डको आवश्यकता पर्छ । लेखा अधिकृतले कति पढ्ने, सञ्चालकको योग्यता कति हुने, कर्जा शाखा कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यो पुस्तकको मुख्य विशेषता के हो ?
यो विशेषतः यो एउटा ‘म्यानुअल गाइड’ (मार्गदर्शन) नै हो । एउटै पुस्तकमा शतप्रतिशत ज्ञान र सूचना दिन त सकिँदैन । तर मैले आफूले सकेको ज्ञान र सूचना दिने प्रयास गरेको छु । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पालना गनुपर्ने नियम, संस्था खोल्न चाहने व्यक्ति, सहकारी सञ्चालन गरिरहेका लगानीकर्ता र नियामक निकायका लागि यो पुस्तक फलदायी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रका पुस्तक बढी लेखिन्छन् । तर सहकारीका पुस्तक किन लेखिएका छैनन् ?
बैंकका नियम र राष्ट्र बैंकका नियम तथा सूचना वेबसाइट एवं पाठ्यपुस्तकमा सजिलै पाइन्छन् । मौद्रिक नीति र सर्कुलर पनि सजिलै भेटिन्छ । तर सहकारी क्षेत्रको जानकारी, ऐन नियम, नीति सजिलै पाइँदैन । इन्टरनेटमा पनि त्यति राखिएको छैन, जसले गर्दा सहरकारीबारे बुझ्न चाहने मानिसलाई गाह्रो परिरहेको छ । रजिस्ट्रारको कार्यालयमा केही सूचना छ, केही डिभिजन कार्यालयमा छ । यी सबैलाई बटुलेर एकै ठाउँमा राखिएको छैन । यस्तै सहकारी सम्बन्धी जति पुस्तक बजारमा आए, ती सिद्धान्तमा मात्र अल्झिएका छन् । विदेशी उदाहरण दिएर त हाम्रा सहकारीलाई के फाइदा ? त्यसैले मौलिक ज्ञानलाई अभिप्रेरित गर्ने खालका पुस्तक यहाँ कम लेखिएका छन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्र किन सन्तुलित छैन ?
अर्थतन्त्रले राज्यका सबै क्षेत्रको योगदान पाएमात्र सबल हुन्छ । एउटा क्षेत्र मात्र सुधारेर अर्थतन्त्र उकासिँदैन । लगानी, उत्पादन, विप्रेषण, निर्यात आदि सबैको योगदान बलियो भएमा अर्थतन्त्र सबल हुन्छ । संघीयताले यी सबै विषयको समुचित सम्बोधन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हामीले खोजेको आर्थिक समृद्धि हाम्रै युगमा आउनेछ ।